नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : पृथ्वीनारायण शाह , हार्दिक श्रद्धा सुमन तिमीप्रती !
पृथ्वीनारायण शाह , हार्दिक श्रद्धा सुमन तिमीप्रती !
तिमी प्रती हामीलाई सदा सदा अती उच्च गौरब छ । तिमीले एकिकरण गरी बनाइदिएको नेपाल र त्यहा जन्मे हुर्केको म एक नेपाली । आज हामीलाई फेरी तिमी अथवा तिमी जस्तै अर्को पृथ्वीनारायण शाहको खाँचो छ । आज तिम्रो अभाबमा देश छिन्न भिन्न हुँदैछ । तिमीले आर्ज्याको मुलुकमा नाजायज कुपुतहरु आज देश चिरा चिरा पारेर फेरी बाइसे चौबिसे राज्य बनाउने धुनमा छन । देश लुछिदै छ, चुँडिदैछ, न्याय निसाफ सबै हराउँदै जाँदा तिम्रो झन झझल्को आएको छ । तिमी फेरी जन्म लिएर आउ । हार्दिक श्रद्धा सुमन तिमीप्रती राष्ट्रिय एकता दिबसको अबसरमा ।
अध्यक्ष - अन्तराष्ट्रिय कलाकार मँच, अमेरिका
(www.IAFAmerica.com) सम्पूर्ण परिवार
प्रधान सम्पादक : नेपालमदर डट कम (www.NepalMother.com)
निस्पक्ष डट कम (www.Nispakshya.com)
Posted by www.Nepalmother.com at 8:35 PM